मार्क्स त्रिकालदर्शी नभएकै कारण मार्क्सवादमा समस्या आयो – हिमाल दैनिक
कम्युनिष्ट म्यानीफेष्टो (घोषणापत्र)मा सर्वहारा वर्गको तानाशाही (अधिनायकत्व)बारे उल्लेख नै छैन
१५ भाद्र २०७६, आईतवार १८:५२
आकर्षक उद्घोषक उज्वल प्रसाइजी,
वहाँलाई त हेर्दै बुझिन्छ उहाँको उमेर ५० वर्ष भन्दा कम छ। आहुतीजीको उमेर चाँही भन्न सक्दिन। यसो इतिहास हेर्दा बढि नै हो कि जस्तो लाग्दछ तर, अनुहार हेर्दा कम नै हो जस्तो छ।
यहाँ मलाई आहुतीजीले सजिलो बनाइदिनु भएको छ। उहाँले भन्नु भयो, मैले यो पुस्तक सबै पढेँ र मेरो सरोकारका विषयमा विशेष ध्यान दिएँ। म उज्वल प्रसाइजीलाई सम्झाउँदै भन्छु, मैले सबै पढेको दाबा गर्न सक्दिन तर, सरोकार भएकाजति कुरा सबै पढेँ।
सरोकार भएका कुरा सबै पढेर सर्सरी हेरेपछि यी सबैकुरालाई सबैतिरबाट सर्सरी हेर्दा एउटा सजिलो निश्कर्षमा सरसर्ती पुगेः पुस्तकमा तीन खालका विषय छन्।
अति सरलः सबैले सजिलै बुझ्ने, बुझ्न खोज्ने र सबैले बुझ्न पर्ने। त्यी कुरा बुझ्नका लागि विशेषज्ञ हुनु पर्दैन।
अर्को, पुस्तकमा अति जटिल कुरा पनि छन्। विशेषज्ञलाई पनि बुझ्न गाह्रो पर्ने। मार्क्सवादका बारेमा यस्ता कुराहरु छन् कि मार्क्सवादमै पिएचडी गरेका मान्छेलाई पनि हम्मेहम्मे पर्न सक्दछ।
तेस्रो, यस्तो विषय पनि छः समयको अभावले हो वा डाक्टरसाब (लेखक)को दृष्टि नपुगेर हो त्यी कुरा यसमा परेकै छैनन्।
परेका कुरा, परेकामध्ये सजिला कुरा, परेका कुरा, परेकामध्ये अप्ठ्यारा कुरा, मेरो विचारमा पर्नु पर्ने तर, नपरेका कुरा। यी तीन विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना टिप्पणी पेश गर्दछु।
डाक्टर चैतन्य मिश्रप्रति मेरो सम्मान नै झल्किँनेछ। इग्ल्याण्डका अत्यन्त ठूला नोबल पुरस्कार प्राप्त विद्धान बर्टेण्ड रसेलकाबारेमा खासगरी यो कथन प्रचलित छ। उनले केही किताब यस्ता लेखेका छन् कि, सरल भन्दा सरल पाठकले पनि त्यीनलाई यो पनि कुनै किताब लेखेको हुन्छ? के किताब लेखेको होला भन्ने हुन्छ। केही किताब विशेषज्ञले पनि नबुझ्ने खालका छन्।
उनका गणित, भौतिकशास्त्रमा लेखेका पुस्तक र पिओर फिलोसफिकल विषयमा लेखेका पुस्तक। यसमा उहाँले तीनवटा बडो मार्मिक विषयलाई ध्यान दिनु भएको छ र बेला बेलामा उठाउनु भएको छ।
आज नेपाललाई चाहिने भनेको सोसियल डेमोक्रेसी हो। आज नेपालले खोजेको सामाजिक लोकतन्त्र हो। आज सबै राजनीतिक दलले अन्य लफ्फाजी (वामपन्थी लफ्फाजी भन्ने शब्द छ) बिर्सिएर अरु कुरा पछि होला, सोसियल डेमोक्रेसी सबै मिलिजुली कायम गरौँ न भन्नु भएको छ।
सोसियल डेमोक्रेसीको उहाँले बडो सरल व्याख्या दिनु भएको छः यो भनेको पूँजीपतिलाई पनि एकाधिकार र मनपरी गर्न पनि नदिने, मजदूर वर्गको न्यूनतम् भन्दा अलि बढि भनौ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान, वस्त्र, आवास (नाना, माना र छाना)को समस्यामा राज्यले हस्तक्षेप गरेर पूरा गराउनु पर्छ। यो नै आजको एक प्रकारको कार्यसूचि हो। राष्ट्रिय दायित्व हो भनेर उहाँले एक होइन अनेक ठाउँमा भन्नु भएको छ।
आज चाहिएको सामाजिक लोकतन्त्र हो भन्ने शिर्षकका दुई/तीनवटा लेख पनि छन्। मेरो विचारमा यो हामी सबैको चासोको विषय हो। सडकमा हिँड्नेको, गाडी गुडाउनेको, ठेला चलाउनेको, मास्टरको, प्रोफेसरको, डाक्टरको, पत्रकारको सबैको।
यो किन भइरहेको छैन त? भन्नेबारेमा गहन शास्त्रीय बहसको आवश्यकता छ। अर्को यस पुस्तकमा आदिदेखि अन्त्यसम्म उहाँले यो देशमा लोकतन्त्रका नाउँमा दलतन्त्र हावी भयो भन्नु भएको छ।
डाक्टर चैतन्य मिश्रले लेख्नु भएको यस पुस्तकको भूमिकामा दलतन्त्रको अभिसापको संकेत र अपराधको उल्लेख गर्नु भएको छ। यसको अन्तिम लेखमा पनि यहि कुरा दोहोर्याउनु भएको छ।
मेरो विचारमा यो सबैले बुझेको, बुझेको मात्र होइन भोगेको पनि हो। उहाँले विश्वविद्यालयको विषयमा कसरी त्यहाँ भिसी, रेक्टर, रजिष्टारहरु विगतमा दलगत आधारमा बाँडिन्थे, त्यसबारे गोविन्द केसीको लेखबाट सुरु गर्नु भएको छ। कसरी त्यसले शिक्षा प्रणाली र यससँग सम्बन्धित जीवनका प्रत्येक अंगलाई प्रभावित गरेको छ।
दोस्रो, यो अनुभवले नै भनेको कुरा छ, बुझ्न पनि सजिलो र बुझाउन पनि झन सजिलो कुरा यस पुस्तकमा छ जुन एकदमै मननीय र समर्थनीय कुरा छ।
तेस्रो, यस पुस्तकमा अलिकति बुझ्न गाह्रो त्यो के भनेको होला भन्ने छ। जुन कुरा नबुझ्दाखेरि तपाई हामी सबैको भविश्य र नेपालकै भविश्य पनि खतरामा पर्ने कुरा छ। यस समाजबाट सुस्तरी तर, निश्चित रुपले राजनीतिको अपहरण हुँदैछ। नेपाली समाजको, नेपालको, नेपाली घरद्धारको, स्कूल, कलेजको अराजनीतिकरण हुँदैछ।
एकप्रकारले भन्ने हो भने, महेन्द्रवाद पञ्चायती व्यवस्था फर्किँदैछ। उहाँले यो लेख्न चाहनु भएको छैन। राजा महेन्द्रको मुख्य आदेश र याचना के थियो भनेः नेपालीहरुले जे गरेपनि हुन्छ तर, राजनीति गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै खालको अराजनीतिकरण नभनिकन विगतमा ०४७ सालदेखि नै थालिएको थियो, अझ अहिले आएर झन चर्किएको छ। यो सबैका निमित्त हानिकारक हो।
उहाँले प्रष्ट भन्नु हुन्छः एउटा शिक्षक तलब मात्रै खान्छ र स्कूल आउँदैन भने त्यो राजनीति हो कि होइन? यसमा हामीले अडान लिने कि नलिने? त्यसमा हामीले बोल्ने कि नबोल्ने?
अहिले झलझलि भएको घटना बताउँछु। म जुन गाउँमा जन्मिए त्यो अहिले नगरपालिका भएको छ। त्यहाँ फोहोरको डङ्गुर छ। नगरपालिका र राजनीतिक कार्यकर्ताबीचको झगडामा फोहोर उठाउन दिएका छैनन्। गाउँ गनाइरहको छ। अब त्यो राजनीति हो कि होइन? त्यो फोहोरबाट रोगको महामारी फैलिन्छ कि फैलिँदैन? त्यो कुरा उहाँले अर्कै शब्दमा बडो सशक्त रुपले उठाउनु भएको छ।
प्रत्येक व्यक्तिले राजनीतिमा चासो लिनु जरुरी छ, जरुरी छ, जरुरी छ। यस कुरामा झन ज्यादा निश्कर्ष छ। लोकतन्त्र भनेको कुनैपनि प्रकारको बढिभन्दा बढि जनताको राजनीतिकरण गर्नु हो र राजनीतिकरण हुनु हो।
जनताले सचेत भएर, कुरा बुझेर, क्रान्तिकारी साहित्य पढेर, क्रान्तिकारी कविता लेख, रचना गरेर राजनीतिमा हस्तक्षप गर्नु पर्दछ। जुलुसमा आएर, नारा लगाएर गर्नु पर्छ।
राज्यले पनि यस्ता संस्थाहरु बनाउनु पर्र्छ, जहाँ आम नागरिकको बढि भन्दा बढि स्टके/चासो होस्। उनीहरुलाई लागोस् कि यदि हामीले यसमा बोलेनौँ भने त बिग्रीन्छ। चाहे त्यो वडाको राजनीति होस्, महल्लाको होस् वा टोलको राजनीति होस्। यो तीनवटा कुरा उहाँले सूत्र वाक्यका रुपमा यथासम्भव व्याख्या पनि गरेर बारम्बार भन्नु भएको छ।
उहाँले राख्नु भएको प्रत्येक प्रस्तावमा म समर्थन गर्दछु र यसमा मेरा विचारमा राम्ररी राजेन्द्र महर्जन र उज्वल प्रसाई जस्ता व्यक्तिले पनि यसलाई विमर्शको केन्द्रका रुपमा बहस चलाउनु पर्र्छ।
यति उहाँले भनिदिनु भयो र मैले समर्थन गरेँ भनेर वा मन पर्यो भनेर कुरा पुग्दैन। यो त उहाँले प्रश्न मात्रै राखेको हो। समाधान दिनु भएको छैन। रोग तीनवटा हुन्छन् भनि देखाउनु भएको छ। तर, त्यो रोगको यति सजिलै इलाज त छैन नि।
त्यो उहाँले इलाजको प्रिस्कृप्सनका धेरै धर्का कोर्नु भएको छैन, संकेतसम्म गर्नु भएको छ।
मेरो विचारमा यी तीनवटै कुरा बडो महत्वपूर्ण छन्। यी तीन कारणले सजिला पनि छन्। बुझ्न पनि सजिला छन्। बुझाउनु पनि सजिला छन् र तत्कालै बुझिहाल्ने खालका पनि छन्।
यसपछि उहाँ चाहेर वा नचाहेर अनेक प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा जटिल र कठिन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ। नेपालीमा भनाई छ निः जति बुझ्न झन् कठिन, झनझन बुझ्यो झन कठिन भन्ने खालको छ। यसतर्फको संकेत कमरेड आहुतीले गरिसक्नु भएको छ।
उहाँ प्रवेश गर्नु भएको क्षेत्र हो मार्क्सवाद। अब मैले तपाइहरुलाई चेतावनी दिइसकेँ, यो मार्क्सवाद भन्ने विषय लगभग वेदान्त जस्तै हो। ब्रम्ह जस्तै अथवा के के भन्ने हो अब? निर्वाण बरु अलि सजिलो होला। जति बुझ्यो उति कठिन खालको छ।
यसमा उहाँ आफैँले पनि समस्या निम्त्याउनु भएको छ। उहाँ हो कि महर्जनजीको हो, (चैतन्य सरको) भूमिकामै समस्या छ जहाँ मार्क्स र एन्गेल्समा पनि मतभेद थियो भन्नु भएको छ। मार्क्स, एन्गेल्सका पनि सबै कुरा मिल्ने त कहाँ हुन र? भनि लेखेको जस्तो लाग्दछ।
अब मार्क्स र एन्गेल्सको मात्र होइन, मार्क्स र मार्क्समै पनि मतभेद छ भन्ने पनि थुप्रै व्यवहार आएको छ। मार्क्सेलोजिष्टहरु, जसले २२ वर्षको उमेरदेखि ७५ वर्षको उमेरसम्म मार्क्स, मार्क्सको मात्रै शास्त्र लेखे, यहाँ शंकराचार्य र रामामनोदाचार्यले वेदान्त, वेदान्त लेखेजस्तै उनले अर्ली मार्क्स, लेटर मार्क्स लेखे। जसमा अर्ली मार्क्स मानवतावादी थिएः इकोनोमिक्स एण्ड फिलोसोफीका राइटर, जर्मन आइडियोलोजीका लेखक, पछाडि भौतिकवादी हुँदै गए भनि लेखेका छन्।
कम्युनिष्ट म्यानीफेष्टो (घोषणापत्र)मा सर्वहारा वर्गको तानाशाही (अधिनायकत्व)बारे उल्लेख नै छैन। कम्युनिष्ट म्यानीफेष्टोमा राजनीतिक दलको भूमिका उल्लेख नै छैन। किटेर के लेखेका छन् भने, कम्युनिष्टहरु आफ्नो दल बनाउँदै बनाउँदैनन्। उनीहरु त भएकै पार्टीहरुको अगुवाई गरेर बस्छन्। ‘दे आर दि मोष्ट फरवार्ड लुकिङ’ भनि जर्मनीमा लेखेका छन्। सर्वाधिक अग्रगामी दस्ता हुन् भनि लेखेका छन्।
एउटा मार्क्सवादका विशेषज्ञ जसले भनेका छन्ः अर्ली मार्क्स र लेटर मार्क्समा धेरै फरक छ। अब एन्गेल्समा त भन्ने नै भए। तर, मार्क्स र एन्गेल्सको फरकमा ठूलो विवादको विषय के छ भने, द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद भन्ने शब्द मार्क्सका रचनामा छन् त? यसको स्पष्ट उत्तर छः कार्लमार्क्सका रचनामा द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद भन्ने शब्द छैन, छैन, छैन।
यो एन्गेल्सले पहिलो पटक प्रयोग गर्छन। तर, यसमा मार्क्सको प्रसंगमा भनिएको के छ भने, एन्गेल्सले प्रयोग गरेको शब्द ‘डाइलेक्टिस् अफ नेचर’ भन्ने पुस्तक हो त्यो मार्क्सकै जीवनकालमा छापिइसकेको थियो।
मार्क्सका यस्ता धेरै रचना छन् जसमा एन्गेल्सको नाम लेखिन्थ्यो। पत्रकार (सम्पादक)ले लेख माग्दथे, खासगरी अमेरिकाको न्यूयोर्क ट्रिव्युन भन्नेमा उनले लेख लेख्दथे। त्यसैबाट उनको दानापानी चल्दथ्यो। अनि तिमीले लेखेर पठाइदेउन भनि एन्गेल्सलाई भन्थे। यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो।
यसैगरी यस पुस्तकमा लेखेको प्रस्तावनामा एउटा महत्वपूर्ण प्रस्तावना छ। लेनिन र माओले मार्क्सको मूल परम्परा, मूल प्रस्तावनासँग न्याय गरेनन् भन्नु भएको छ। यसमा अघि आहुतीजीले प्रकारान्तरले भने जस्तैः अरे, लेनिन र माओेमा किन जानुहुन्छ? एन्गेन्सले नै न्याय गरेनन् भन्ने खालको प्रश्न उहाँले अघि राख्नु भयो।
म यसलाई प्रकारान्तरले समर्थन गर्दछु। सँगसँगै यो पुस्तकले हामीलाई नयाँ चरणको बहसमा लैजान्छ। बहसको त्यो नयाँ चरण डाक्टरसाब (मिश्र)ले लेखेको किताबमा पटक पटक लक्षित छ तर, विवेचित छैन।
राजनीति भनेको के हो? राजनीतिले कुन हदसम्म कुनै शास्त्रसँग खेलवाड गर्न सक्दछ? अंग्रेजीमा सभ्य भाषामा भन्दा लिवर्टी दिन सक्दछ? यसलाई अझ बुझ्ने भाषामा भन्दा उज्वल प्रसाइको भाषामा एउटा विधा सिनेमा र अर्को साहित्य छ।
अघि भारतका न्यायाधीश तर्सिएको पुस्तक ‘वार एण्ड पिस’ भन्ने उपन्यासमा हिन्दुस्तानमा मात्र होइन, युरोप कति फिल्म बनिसकेका छन्? वार एण्ड पिसमा कति नायक, नायिकाले खेलेका छन्? त्यसको कति किसिमको एडप्टेसन भएको छ? यो हजार/१५ सय पृष्ठको पुस्तक छ, यसको तीन घण्टा, पहिले कुनै जमानामा त तीन घण्टा पनि हुँदैनथ्यो। मैले सम्झना गरेसम्म त्यस पुस्तकमा बनेका तीन/चार वटा फिल्म त मैले नै हेरिसकेको छु। त्यो पनि विश्वविख्यात पुराना अभिनेता/अभिनेत्री ग्रेटा गार्बोदेखि आधुनिक जमानाकी अड्रे हेपवर्नले खेलेका छन् जहाँ त्यसको एडप्टेसन निर्देशकले आफ्नो अक्कल र बुद्धि अनुसार गरेको हुन्छ।
‘सतरंजकी खिलाडी’ हिन्दीको प्रसिद्ध कहानी बंगलाका महान निर्देशक सत्यजित रायले बनाएको फिल्ममा अम्जद अलि खान र सवना आज्मी छन् जसको अन्त्य नै खतम गरिदिएका छन्।
लेनिनलाई धन्यवाद दिउँ, उनले अन्त्य खतम नगरेपनि प्रारम्भ खतम गरिदिएका छन्। लेनिनले तत्कालिन परिस्थितिमा बुझे अनुसार, मार्क्सलाई नै लगाउन खोजेका हुन्। मार्क्सवादका विद्धान भन्नु परेन, द्धितीय अन्तर्राष्ट्रिय (सेकेण्ड इन्टरन्यास्नल)मा प्रथम महायुद्धका दर्मियान भिषण फूट भयो। त्यस भिषण फूट (ग्रेट सिज्म)का हाँगाविँगा थुप्रै थिए। त्यी हाँगाविँगाका व्याख्या गर्दा साढे तीनवटा (घटाएर भनेको) मुख्य धारा छन्।
एउटा लेनिनले नेतृत्व गरेको धारा जसको औचित्य ठहर्याउने उनले ‘इम्पेरियलिज्म इज द हाइएष्ट स्टेज’ अर्को ‘स्टेट एण्ड रिवोल्युशन’ भनि दुइवटा पुस्तक लेखे अथवा त्यसका आधारमा उनले क्रान्ति गरे। त्यसभन्दा विल्कुल पृथक धारणा कार्ल काउत्स्कीको थियो। जसले लेनिन चोर, डाँका, ज्ञानी, सन्त, महन्थ जेसुकै भएपनि मार्क्सवादी भने होइनन् भनि वोल्सेभिक रिवोल्युसन भन्ने पुस्तक लेखे।
अर्को ज्यादा चर्चामा नआउने तर, बडो महत्वपूर्ण एडवर्ट वर्डनास्टिङले त लेनिनका विरुद्धमा किताब पनि लेख्नु परेन। उनलाई पहिले नै संशोधनवाद भनिइसकेको थियो। जसले मार्क्सको देहान्त भएको १५ वर्षभित्रमै र एन्गेल्स वितेको पाँच वर्षभित्रमा लेख्न थालिसकेका थिए कि मार्क्स र एन्गेल्सको विश्लेषण ठिक छैन।
उनले आफ्नो इभोल्युसनरी सोसियलिज्म पुस्तकमा लामो लेखहरु लेखेका थिए। यी तीनवटा धाराभन्दा पृथक धारणा राख्ने महिला रोजा लग्जेम्बर्र्ग थिइन्। यसपछि मार्क्सवाद (समाजवाद)को स्वर्णयुग भन्ने जमानामा यति धारा, उपधारा छन् जुन रोचक, शिक्षाप्रद र विचारोत्तेजक पहलुहरु पनि छन्।
यी सबै विषयमा कुरा गर्दा सजिलो छैन। लेखक एउटा विषय मार्क्सवादको शास्त्रीय विषयमा प्रवेश गर्नु भएको छ र कतिपय प्रस्तावना पेश गर्नु भएको छ।
म प्रस्तावनाको पक्ष वा विपक्षमा केही भन्न चाहन्न। बढिमा म यसलाई स्पष्टिकरण गर्न चाहन्छु।
लेखकले पनि भन्नु भएको छ कि रुसमा स्टालिन आएपछि अथवा थोरबहुत लेनिनकै पालामा कार्ल मार्क्स र एन्गेल्सको देवत्वकरण भयो। कार्ल मार्क्सका हरेक शब्द, हरेक भाषणहरु खोजिखोजी संकलन गरी छापियो र संग्राहलयमा राखियो जुन राम्रो कुरा हो। तर, त्यसमा माक्र्सका शब्दको व्याख्यामाथि व्याख्या अर्थात कुनै धार्मिक ग्रन्थमा जस्तै व्याख्या हुन थाल्यो।
त्यसमा जो शासक भयो अथवा बलियो छ, जोसँग बन्दुक छ उसैको जय जयकार गरी व्याख्या भयो।
खुशीको कुरा हामी नेपाल भन्ने रमणीय धर्तिको देशमा छौँ। एकताका यो देशमा प्रचण्डपथको प्रचण्ड चर्चा थियो। तपाइहरुलाई सम्झना होला, प्रचण्डपथमा के थिएन त्यहाँ? दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, सौन्दर्यशास्त्र थिएन कि के थिएन? माओवादी होइन, माक्र्सवादी सौन्दर्य शास्त्रका ज्ञाता कमरेड मोहन वैद्यले पनि प्रचण्डपथको सौन्दर्य शास्त्र लेख्नु हुन्थ्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराइले प्रचण्डपथका सैद्धान्तिक आधार लेख्नु भएको थियो।
प्रचण्डपथको त त्यत्रो महिमा गाइयो भने, जबकी उनीहरुको राज्य पनि थिएन, अब त्यहाँ त माक्र्सवादको महिमाको कुरा गर्दा जति गाए पनि थोरै हुने नै भयो। झन स्टालिनको पालामा त कुरै भएन। खासगरी डाइलेक्टिकल म्याटेरियलिज्म भन्ने कुरा उनले शिखरमै चढाए।
यस पुस्तकको एउटा पहलु के हो भने, यसले मार्क्सवादका बारेमा गम्भीर शास्त्रीय बहस गरेको छ। अदभूत बौद्धिक र नैतिक साहसको प्रदर्शन गरेर चैतन्य मिश्रले लेनिन र माओलाई खारेज नै गर्नु भएको छ।
म पनि लेनिन र माओलाई खारेज गर्ने नै मान्छे हुँ तर, मेरो भनाई यो कि कुनै पनि व्यक्ति चाहे त्यो माओ होस् वा लेनिन वा मार्क्स वा गान्धी न बी.पी., न देवता न गुरु, न पार्टी अध्यक्ष न प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि विचारको केन्द्रमा राखिनु हुँदैन।
मानिसका यतिधेरै कमजोरीहरु छन् मलाई त्यसको जानकारी छ। व्यक्तिगत मेरो कमजोरी हो तर, महापुरुषका यति धेरै कमजोरी छन् यसलाई लामै बहस चाहिन्छ। यसैले मार्क्स, एन्गेल्सका रचनाहरुलाई देवत्वकरण गरियो। त्यसक्रममा पहिलो द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद भन्नेबारे उचित स्पष्टिकरण भएन। दोस्रो, व्यक्ति के हो? उसको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे आजपनि समाजवादी (मार्क्सवादी भनेर) परम्परामा स्पष्टता छैन।
डाक्टरसाबले एउटा महत्वपूर्ण र सार्थक लेख लेख्नु भएको छः हामी कस्तो मानिस बनाउँदै छौँ? अथवा हामी कस्तो मनुष्यको निर्माण गर्दैछौँ?
मेरो विचारमा लोकतान्त्रिक समाजवादको नवनिर्माणमा यो प्रथम महत्वपूर्ण विषय होः हामी कस्तो मनुष्य बनाउँदैछौँ। बनाउँदैछौँ होइन, हामी कस्तो मनुष्य बन्दैछौँ?
हाम्रो अब स्वादमा पनि मोही र कोकाकोलाको छनौटमा कोकको पक्षमा ज्यादा मत बनिसकेको छ। लस्सी र भुटेको मकै थाहा छैन। अर्थात हाम्रो नास्ता नियन्त्रित छ, जल, प्रातकालिन भोज नियन्त्रित छ, भाँडाकुँडा नियन्त्रित छ। कतिपय नेपाली शब्द मेरो जीवनकालमा हेर्दाहेर्दै विरानो भएका छन्।
हामी कस्तो मानिस बन्दैछौँ र कसले बनाउँदैछ भन्ने कुरामा पूँजीवाद भनेपनि, साम्राज्यवाद भनेपनि भूमण्डलीकरण भनेपनि त्यसैले बनाउँदै छ। त्यसतर्फ मार्क्सवादले बेलैमा ध्यान दिन सकने। यसको ठाउँ ठाउँमा संकेत छ।
लेखकले हामी कस्तो बन्दै छौँ भन्ने प्रश्न कुनै पनि स्वस्थ समाज निर्माणको केन्द्रविन्दुमा रहने प्रश्न हो।
मार्क्सले तीनवटा कुरा देख्नु भएको थिएन। एउटा देख्नु भएको थियो त्यहि पनि आधामात्रै। त्यसले स्वयं मार्क्सलाई आफ्नै जीवनकालमा अप्ठयारो परेको थियो। उनको सिद्धान्तमध्ये एउटा छः फलिङ्ग रेट अफ प्रोफिट। मुनाफाको घट्दो रेट। उनको मूल प्रस्तावनामा थियोः श्रम मूल्यको एकमात्र स्रोत हो। अब श्रमको विकास सँगसँगै नयाँ नयाँ मशिन बन्छन्। अहिले त कम्प्युटराइज मशिन बनिसकेको छ। रोवर्ट लेडी (सोफिया) नेपाल आएर युवालाई प्रेममा पारिन्। रोवर्ट लेडीसँग प्रेममा पर्ने जमानामा श्रम सम्बन्धि माक्र्सको प्रस्तुतीमा केही कमजोरी छ कि भनिकन मार्क्सको देहान्तको लगत्तै पछि लेख छापिन थालेको थियो। प्रश्न उठाउने त्यी अनुपम, अद्धितीय समाजवादी चिन्तनकी सबैभन्दा साहसी र प्रखर महिला सायद रोजा लग्जेम्वर्ग नै थिइन होला। उनले आफ्ना पुस्तकमा ‘बुढा’ले हिसाब किताब विगारेछन् भनि भन्थिन्। तर, उनलाई सबैले हुवा हुवा गरी हटाइदिए।
दोस्रो, मार्क्सले पूँजीवादको विकासमा श्रमको योगदान त देखे, उपनिवेशको पनि एकहदसम्म देखे तर, प्रकृतिको योगदान देख्न सकेनन्। प्रकृति नष्ट हुँदै जाँदा पूँजीवादी समाज आफैँ विरक्तिने खतरा हुन्छ। हरियो वन नेपालको धन भन्दा भन्दै काठ नै अहिले हेर्दा हेर्दै सिद्धियो र नेपाल उजाड भइसकेको छ। वातावरण बदलिएर मधेसमा जाडोमा तुवाँलोले बस्नै सकिँदैन। सँगसँगै सारा खनिज पर्दाथ, कोइला, फलाम, इन्धन, डिजेल, पेट्रोल रित्तिदै गएको छ जसको प्रत्यक्ष असर पूँजीवादी देशमा पर्दैछ। यो पनि कार्ल मार्क्सले देख्न सकेनन्। कसरी देखुन त? उनी त्रिकालदर्शी त थिएनन्। यो नदेख्नाले मार्क्सवादमा केही समस्या आयो। त्यसको समाधान गर्ने क्रममा लेनिन त लेनिन, माओ त माओ, चाउचेस्कु पनि मार्क्सकै नाउँ लिएर जन्मिए र मार्कोस, पोलपोर्ट र उत्तरकोरियाका साक्षात सम्राटहरुको जन्म भयो।
त्यसैले यसलाई म मार्क्सवादको कमजोरीसँग जोड्दिन। राजनीतिलाई अभ्यास गर्नेबेलामा वार एण्ड पिसको फिल्म बनाउँदा जस्तै कमजोरी भएजस्तै हुँदोरहेछ भन्ने कुरामा राजनीति शास्त्रीलाई सम्झाउन चाहन्छु।
लेनिनका सामु आफ्नै समस्या थियो। उनले त्यो दिन सत्ता नलिएको भए, (त्यो दिन, त्यो घडि)मा राइटिष्टले अर्थात सैन्यशक्तिले सत्ता लिने थियो। यहाँ पनि कोतपर्वको विषयमा बाबुराम आचार्यको यस्तो फेरि कहिल्यै नहोस्मा जिवन्त प्रस्तुती छ। जसमा जंगबहादुरले यदि पाँच मिनेट ढिला गोली हानेको भए, उनी खतम हुने थिए। त्यस्तै संवेदनशील समयमा लेनिनले आफ्ना कमरेडलाई चेताए, उनले लेखेको चिठी छ जसमा उनले भने, सत्ता भोलि कब्जा गर्दा ढिलो हुन्छ, हिँजो गरेको भए छिटो हुन्थ्यो। Power must be captured today, tonight लेखेका छन्।
यसैले लाग्दछ, कथम कदाचित लेनिन नभएको भए मार्क्सले यति विश्वव्यापी प्रभाव राख्नु हुने थिएन।
समग्रमा मार्क्स र लेनिनको उल्लेख भएको पुस्तकको टिप्पणीमा आखिरमा मलाई लाग्दछ, एउटा बडो अप्ठ्यारो निर्णय विद्धानहरुले गर्नु परेको छ। जुन समाजवाद नेपालमा चाहिएको छ, जुन समाजवाद तेस्रो विश्वलाई चाहिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक समाज हामीलाई चाहिएको छ त्यसको सुरुवात अब बेग्लै किसिमले हुन्छ। प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ। अर्थात यी तीनवटा वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर, जमिन छैन, जंगल छैन, खनिज पदार्थ छैन यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले विपूर्णताका आधारमा समाजवाद ल्याउने होइन, सादगीका आधारमा समाजवाद ल्याउने हो।
सादगीको त्यस दिशामा अगाडि बढ्नका लागि हामीले मार्क्स, एन्गेल्स, होचिमिन, लेनिनको त्याग तपस्या गान्धी, जयप्रकाश, लोहिया, बी.पी. कोइराला, किसुनजी, गणेशमानको जीवनशैलीबाट शिक्षा लिनु परेको छ। यसैले लाग्दछ, समाजवादको वैकल्पिक बाटो सम्भव छ। सोसियल डेमोक्रेसीको बाटो सम्भव छ त्यसका लागि कार्लमाक्र्स, लेनिनलाई जहाँ राख्नु छ त्यहि राखौँ र भनौँ आँखा नझिक्याइकन तपाई त्यहि बस्नुहोस्, हामी तपाइले भनेको बाटोमै जाँदैछौँ तर, त्यो बाटो अलि फरक छ। अर्थातः
मार्क्स-लेनिनले नै मार्क्सवाद नबुझेर मार्क्सवाद संकटमा पर्‍यो कि,पूँजीवादले अभयदान पायो?
Prevपछिल्लोजापानमा राष्ट्रिय ध्वजा फहराउँदा…
अघिल्लोला लिगामा भ्यालेन्सियालाई पेनाल्टीको साथNext